प्रकाशमानको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीले जनतालाई अपमान गर्न पाउँछन् ? - Setokalam.com
प्रकाशमानको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीले जनतालाई अपमान गर्न पाउँछन् ?
काठमाडौं, २५ वैशाख । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्रीले विपक्षीलाई होच्याएको आरोप लगाएका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय जागरणसभालाई सभागृहमा सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले प्रधानमन्त्रीले विपक्षीलाई होच्याएको आरोप लगाएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले विपक्षीलाई होच्याउनुभयो । विपक्षीलाई होच्याउनु जनतामाथिको अपमान पनि हो । प्रधानमन्त्रीले जनतालाई अपमान गर्न पाउछन् ?’ सिंहको प्रश्न थियो । उनले कम्युनिस्टको नाम र सिद्धान्तको नै टुंगो नभएको भन्दै सिंहले उनीहरुले नेपाली जनतालाई स्थायी नाम समेत दिन नसकेको बताए ।
कांग्रेसले गरेका कामलाई समेत ओली सरकारले आफैंले गरेको भन्दै प्रचार गरिरहेको उनको दाबी थियो । पार्टीलाई संस्थागत रुपमा चलाइए कम्युनिस्ट सरकारसँग मुकाविल गर्न सकिने भन्दै सिंहले स्थानीय निर्वाचन भन्दा पहिले पार्टीको सबै तहको महाधिवेशन गराएर सशक्त बनाउन सभापति देउवासँग आग्रह पनि गरे ।